DHAGEYSO : Madaxweye Gaas oo Hada Shaaciyay Mowqifka Puntland ee Xiisada Imaaraadka | Nabadqaad Online & VOA SOMALI
DHAGEYSO : Madaxweye Gaas oo Hada Shaaciyay Mowqifka Puntland ee Xiisada Imaaraadka
Apr 16, 2018 - Aragtiyood
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa’id ku qabtay saldhigga Ciidanka Badda Puntland ayaa sheegay in aysan jirin dowlad ama cid kale oo u buuxin karta kaalinta ay Imaaraadka ugu jirto.
Waxaa uu beeniyay in Puntland ay xiriirka ku jartay Imaaraadka isaga oo sheegay in IMaaraadka ay kaalin weyn ka qaateen tababarka Ciidanka Puntland sidoo kalena ay mahsaariic malaayiin dollar ah ka wadaan degaannada Puntland.
Gaas waxaa uu sheegay in dowladda Imaaraadka uu ka filayo in ay sii wadaan taageerada Puntland iyada oo uu jiro khilaaf dhinaca diblamaasiyadda ah oo u dhaxeeya dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Dowladda Imaaraadka Carabta.
Maalin ka hor Garoonka Diyaaradah Boosaaso waxaa ka baxay Diyaarad qaadday taabaraayaasha Ciidamada Puntland oo u dhashay Dalka Imaaraadka,waxaana ay baxeen iyaga oo uu muran kala dhexgalay Ciidanka ilaalada Garoonka.
HALKAN RIIX DHAGEYSO WARKA